Mampitandrina ny mpilalao “Animal Crossing” ny Nintendo: Atsaharo ny fanaovana politika raha tsy izany ho rarana ianao · Global Voices teny Malagasy
"Ny zavatra asehon'ny Animal Crossing dia tsy fialamboly fotsiny ihany [...]"
Voadika ny 10 Desambra 2020 3:19 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, русский, Français, Português, 日本語, Filipino, English
Joshua Wong, tao amin'ny Twitter / sary tao amin'ny HKFP.
Ity lahatsoratra manaraka ity dia nosoratan'i Candice Chau ary navoaka voalohany tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 21 Novambra 2020. Navoaka ato amin'ny Global Voices ny lahatsoratra nasiam-panovana ho ao anatin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Nilaza tamin'ny mpilalaon'ny kilalao malaza “Animal Crossing: New Horizons” ny orinasa goavana Japoney Nintendo amin'ny lalao video mba hitsahatra hampiditra votoaty politika na ara-barotra. Nanomboka izany fampitandremana izany taorian'ny nanombohan'ny mpisera isankarazany manerantany, anisan'izany ireo mpikatroky ny mpanohana demokrasia ao Hong Kong, nandefa ny hafatra toy izany.
Nalaza hatramin'ny nanombohany ny volana Marsa ny lalao, nahalafo tahadika maherin'ny 20 tapitrisa tamin'ny volana Septambra. Nahafahan'ny mpilalao namorona ny fitaovana, haingon-trano ary zavaboary hafa araka izay tiany tao amin'ilay nosy tsy misy olona izany.
Nilaza tamin'ny orinasa sy fikambanana ny Nintendo mba “tsy hitondra politika ao amin'ny lalao,” ary nilaza fa ho raràna ireo izay mandika ny torolàlana.
Nampiasa ny endriny handefasana hafatra ara-politika anefa ny mpilalao sasantsasany, anisan'izany ny fifampiresahana amin'ny hafa amin'ny alàlan'ny fandefasan-kafatra mivantana, ny fandefasana karatra paositaly, ny fanavaozana ny pasipaorony ary ny famoronana afisy – .
Tao Hong Kong, nisy ireo mpilalao sasany namorona votoaty manohana ny demaokrasia sy manohitra ny governemanta, ao anatin'izany ny sainam-pirenena misy ny teny filamatry ny fihetsiketsehana toa ny “Afaho Hong Kong, revolisionan'ny androntsika”, ny sary fandevenana ny filoha Shinoa Xi Jinping, ary ny fizarana “famelezana ny ratsy fanahy” mikendry ilay mpitondra ao Hong Kong Carrie Lam.
Nesorina tamin'ny sehatry ny tsena volondavenona Shinoa tamin'ny aterineto ny lalao.
Ny filoha voafidin'i Etazonia Joe Biden dia anisan'ireo izay nanararaotra ny fampiasana ny lazan'ilay lalao. Talohan'ny fifidianana, nanangana ny nosiny virtoaly manokana ny fampielezan-kevitr'i Biden, nahafahan'ny mpilalao “nanao asa an-tsitrapo” tao amin'ny foiben'ny fampielezan-kevitra tao amin'ilay nosy ary nitsidika ireo biraom-pifidianana. Mety ho voarara ilay nosy araka ny torolàlana vaovao:
Nosakanan'ny Nintendo tsy hanaovana politika ny fampiasana ny marika Animal Crossing: New Horizons.
Nilaza tamin'ny Hong Kong Free Press ilay mpikatroka, Joshua Wong fa efa nandray anjara tamin'ny hetsi-panoherana virtoaly maro izy tao amin'ny lalao tamin'ity taona ity:
Ny zavatra asehon'ny Animal Crossing dia tsy fialamboly fotsiny ihany nandritra ny fihibohana, fa fanehoana ihany koa ny zava-mitranga amin'ny tena fiainana andavanandro. Manome safidy hafa izy rehefa voafetra ny fantsom-panehoan-kevitra hafa any amin'ny tambajotra… Mahamenatra ny tsy nijeren'ny Nintendo ny maha-zava-dehibe an'ity lalao ity.